မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို လွယ်လွယ် ကူကူ Block လုပ်ရအောင် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Harddisk Repair and Maintainance
Photos and Image Tools
Photos and Video Editor Tools
ISO and Burning Tools
Office and Document Tools
Audio and Video Converter Tools
All Keys For Antivirus
Mobile,Internet and Other Tools
G-Talk and G Mail
Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည်းများ
Myanmar E-Books များ ...
For Desktop Live Wallpaper and Screen saver
GPS ,GPRS ,AGPS ခြားနားမှုများ ...
Home » အထွေထွေ » မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို လွယ်လွယ် ကူကူ Block လုပ်ရအောင်
မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို လွယ်လွယ် ကူကူ Block လုပ်ရအောင်
By နေမင်းမောင်4:50 AM5 comments
ကျွန်တော် အခု မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို အချိန်အကန့်အသတ် ထားပြီး ပိတ်ထားလို့ ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ရေးပေးသွားပါမယ် .. FocalFilter ဆိုတဲ့ Software လေးကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကို Block လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် မသုံးတက်တဲ့ သူများ အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ ရအောင် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ..
အရင်ဆုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ FocalFilter ကို Install လုပ်လိုက်ပါ .. ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ .. စစချင်း ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ လာသုံးတဲ့ သူတွေကို မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ကြည့်လို့မရအောင် Block လုပ်ပါမယ် ..
ပထမှ ဦးစွာ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အချိန်အပိုင်းအခြားကို ရွေးပေးလိုက်ပါ .. မိမိတို့ Block ချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကို အချိန် ဘယ်လောက်ကြကြာ BLOCK လုပ်ထားမယ် ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
နောက်တစ်ဆင့် မိမိတို့ Block လုပ်ချင်တဲ့ ဆိုဒ် လိပ်စာတွေကို ထည်ပေးဖို့ အတွက် Edit My Site List ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
မိမိတို့ ဘလော့ချင်တဲ့ ဆိုဒ်လိပ်စာကို ထည့်ပြီးရင် Save လိုက်ပါ ..
ပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့် မိမိတို့ မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကို Block လုပ်ဖို့ အတွက် Block My Site List ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကို ဖွင့်လို့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ..
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က Block လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် မတိုင်ခင် ပြန်ဖွင့်ချင်တယ် ဆိုရင် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ .. ပြီးရင် အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Box လေး ပေါ်လာရင် OK ပေးလိုက်ယုံပါပဲ ..
ဒါဆိုရင်တော့ စောစောက Block လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်ကို ပြန်ပြီးတော့ ဖွင့်လို့ ရသွားမှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အောက်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကို တင်ပေးထားပါတယ် ..
Download From Sharebesat
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
Anonymous March 12, 2012 at 3:05 PM
Thankalot bro...
lional March 12, 2012 at 5:11 PM
Anonymous July 4, 2012 at 9:04 AM
ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုက်တွေကို ကိုယ်ကကြည့်ချင်၊ သွားချင်ရင်ရော ဘယ်လိုသွားရမယ်၊ ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရင် အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေး ကူညီပေးပါဦး
sai naung August 20, 2012 at 7:00 PM
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကျန်းမာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် .. နေမင်းမောင်
For Reading On Facebook
Audio and Video Conveters
G-Mail and G-talk အကြောင်း
Harddisk Repair and Maintain
laptop ၀ယ်ယူရာတွင် သိရမည့် အချက်များ
Photo and Image Tools
Photo and Video Editor Tools
Youtube မှ MP4Mp3 .FLV . အဖြစ် download လုပ်ရန်....
laptop tutorial videos by TzH
Laptop များနှင့် Battery Life
hardware အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကျွန်တော် စိတ်ကူးမိသော အမြင်လေးများ
Windows 8 Consumer Preview ကို Virtual Box ထဲမှာ စ...
ArcSoft Perfect365 1.1.0.12
Internet Download Manager 6.10 Build2Final
Perfect Uninstaller 6.3.3.9
Windows7SP 1 တွင် Language Pack ချိန်းပြီး သုံးခ...
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ ( ၁၃ ) ၊ အမှတ် ( ၁၁ )
Windows7Home Basic နှင့် Starter အသုံးပြုသူများ ...
MAGIX Digital DJ v2.00
Soting Logo Maker 3.3
Internet Download Manager 6.10 Beta + Patch
Windows ခွေတွေကို Ultra ISO လေးသုံးပြီးအလွယ် ကူဆုံ...
Virtual Drive အသုံးပြုနည်း
IObit Malware Fighter PRO 1.3.0.3 Final Multilangu...
မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို လွယ်လွယ် ကူကူ Block လု...
Bluefish-2.0.3 For Programer
Rainbowas Theme For Windows 7
အင်တာနက်ဂျာနယ် အတွဲ ( ၁၃ ) ၊ အမှတ် ( ၁၀ )
Intel Chipset Software Installation Utility 9.3.0
AceMoney 4.20.5 Full
Windows_Loader_v2.1.1 For Windows 7
Peer Network ( or ) Work Group ချိတ်ဆက်ခြင်း ( E-...
Photoinstrument_5.4.551 + Serials
Local Area Network အတွင်း Printer Sharing ပြုလုပ်ြ...
မိမိဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ Funny ပုံလေးတွေ ဖန်တီးချင်သူမ...
Windows အတက်မှာ မိမိ မတက် စေချင်တဲ့ Program တွေကို...
Photo.DVD.Maker.Pro.8.35 + Keygen
Uniblue PowerSuite 2012 3.0.5.6 + Key
Nero 8 Micro v8.3.20.0 European Edition
Xbox Skin Pack 1.0
Latop မှတစ်ဆင့် Wifi လွင့်ချင်သူများ အတွက်
အင်တာနက် ဂျာနယ် ( အတွဲ ၁၃ ၊ အမှတ် ၉ )
Avast! Internet Security v7.0.1407 + Serial Key...
Excel 2010 ( Myanmar E-Book )
AAA Logo Business 2010 3.1 Full
Snagit 11 + Serial Keys
Samsung Glaxy Ace တွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖေ...
G-Mail မှ Free SMS ပို့ချင်သူများအတွက် ..
Nexus Boot! For Android
8-bit Waterfall Live Wallpaper for Android
File too large for the Destination file system Error အားဖြေရှင်းရန်
ကျွန်တော်တို့ ဒီလို Error လေးပေါ့ဗျာ။ ကြုံခဲ့ရတာလေးကို အဖြေရှာရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက် လည်း ဖြစ်နေတာနဲ့ ကြုံလို့ ကျွန်ေ...
Internet Download Manager ကို Full Version ဖြစ်အောင် Install လုပ်နည်း
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ တောင်းဆိုတာလဲ များနေတဲ့အပြင် တော်တော်များများလဲ အဆင်မပြေသေးတဲ့ IDM ကို Full Version ဖြစ်အောင်မသုံးတက်သေးတဲ့ သူတွေအ...
Favicon Generator Sites များ
မိမိတို့အသုံးပြုချင်တဲ့ Icon လေးတွေကိုအလွယ်တကူလုပ်ချင်သူများအတွက် Favicon Generator Sites ရဲ့လင့်ခ်တွေပေး ထား ပါတယ်။ ၁။ http://www.fav...
Wireless Networking တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်အရှေ့ပိုင်းမှာလည်း စာအုပ်လေးတွေ တော်တော်များများကို တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီကောင်လေးက...
Windows7Keyboard Shortcuts များ
window7၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ keyboard Shortcuts လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးများ Windows + Spacebar (Aero Peek) Desktop ပေါ်မှာ ဖွင့်ထားတ...
Coolpad 7251 Firmware တင်နည်း
Coolpad 7251 Firmware တင်နည်းလေး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက်တင်ပေးရင်း လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် အ...
NOD 32 အသုံးပြုသူ User များအတွက် 2017 အထိ ထွက်ထားတဲ့ Username နဲ့ Password တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင...
Top Ten Torrent Sites များနှင့် အသုံးပြုပုံများ
Software ရှာဖို့အတွက်က Torrent Sites တွေကိုအသုံးပြုရတာ ပိုပြီး အဆင်အပြေဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ ??? ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ...
Zawgyi-One နှင့် Unicode နှစ်မျိုးလုံးသုံးချင်သူများအတွက်
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ ကွန်ပျူတာကို စတင်အသုံးပြုသူတွေအတွက် Zawgyi-One Install လုပ်နည်းနဲ့ အခု နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ Unicode နဲ့ Zawgyi-O...
ImTOO Video Converter Ultimate 7.8.11.20150923 Multilingual 33MB
Imtoo Video Converter ဟာဆိုရင် မသိသူရှားလောက်အောင် လူကြိုက်များတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုပါ.. MP4, MP3 အပြင် Video & Audio format မျိုးစုံကို c...
Nay Min Blogger
Created By Nay Min Maung